Ningbo ရုံးချုပ် MH စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအထည်ချုပ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်စက်ချုပ်ပစ္စည်းများအတွက်အထူးပြု, 1999 အတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ MH 150 နိုင်ငံများထက် ပို. နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြားဆက်ဆံရေးထူထောင်ထားပါတယ် "MH" နှစ်ဦးစလုံးဟာပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပဈေးကွက်၌ကြီးသောဂုဏ်သတင်းရယူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏နှစ်ကြာပြီးနောက်သောကြောင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, အမ်ကုမ္ပဏီလည်း "ထိပ်တန်း 500 တရုတ်ဝန်ဆောင်မှုစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ" နှင့် "AAA ယုံကြည်စိတ်ချကုမ္ပဏီအဖြစ်မှတ်ခဲ့သည် " ...နောက်ထပ်
ပစ္စုပ္ပန်မှာ, MH သုံးခုထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းအတွက်ကိုအရပ်ရပ်ကွဲပြားစေတော်မူသောကိုးစက်ရုံများပိုင်ဆိုင်သည်။
Ningbo MH ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်ကို 1999 ကတည်းက။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အေးဂျင့်ဖြစ်လိုပါသလား? ပေါ်လာကြ, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ကြှနျုပျတို့အကွောငျး Home ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား --Threads --Zippers --Ribbon & တိပ် --Ropes --Laces --Buttons --Interlining တစ်ခုကိုချုံ့ခြင်း --Tassel & မြိတ် / --Tailoring ပစ္စည်းများ --Garments & ဆက်စပ်ပစ္စည်း --Sewing စက် & အစိတ်အပိုင်းများ --Fabric --Others ကြှနျုပျတို့အကွောငျး --MH ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် --MH စက်မှုဇုန် --- Thread စက်ရုံများ --- ဖဲကြိုး & တိပ်စက်ရုံများ --- ဇာစက်ရုံများ --MH သမိုင်း --Trade ရှိုးများ --Image Galleries --Video အယ်လ်ဘမ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ --Office တည်နေရာ --Feedback အဝန်း --App --ငါတို့နဲ့လာပူးပေါင်းပါ